UMassimo Dutti wethula indlu entsha yokushicilela i-SS21: Izakhi zemvelo | Bezzia
UMassimo Dutti wethula indlu entsha yokushicilela i-SS21: Izinto zemvelo
UMaria vazquez | 12/05/2021 18:00 | Ngigqokani
Umthwebuli zithombe uDan Martensen ubhekele i- Ukuhlelwa okusha kukaMassimo Dutti: Izakhi zemvelo. Umhleli lapho ifemu yaseSpain iphakamisa uhambo oluya emvelweni ngokusebenzisa iqoqo elincane lezingubo ezigelezayo ngamathoni wekhaki.
UMassimo Dutti wethula leli qoqo kuthi njengelifanele ukuhlola imingcele yakho, ukuhamba ukukhanya futhi ungakhathazeki nganoma yini enye ngaphandle kwemvelo. I- izingubo zokugqoka ezilinganayo Banokuphikisana okukhulu phakathi kwezingubo zeqoqo, kepha kubaluleke njengoba lokhu kuvela njengezesekeli, zimbalwa kepha zikhethiwe.
1 Izindwangu nemibala
Izithunzi zeKhaki khukhula iqoqo lezinto zemvelo zefemu. Ngokuhambisana nalokhu, uzothola imininingwane emincane, ama-nuances kanye nokwakheka okwenza leli qoqo libe iqoqo elikhethekile. Injalo nendwangu okwenziwa ngayo ngayinye yezingubo, inhlanganisela ye-acetate engu-76%, i-6% i-polyamide, i-18% kasilika (ibhele likamalibhele).
Zonke izingubo zalo mshicileli omncane zinokusika oketshezi. Okuphawuleka ikakhulukazi izingubo zokuhlukanisa uhlangothi kuma-bass ukuze kungabikho lutho olusivimbela ekuhambeni ngokukhululekile. Uzobathola bobabili benemikhono emifushane futhi benamalengisi, ngamathoni ampunga, amakhaki namnyama.
Kanye nalaba isiketi se-midi nejakhethi yebhomu isethiwe nge-hoodie. Iqoqo lokuthi ekuhlelweni singaphutha ngengubo, kepha lokho kusinikeza ukudlala okuningi kunalokhu ukuze sikwazi ukusebenzisa ingubo ngayinye ngokuhlukile. Futhi abalingisi abangaphansi kakhulu amabhulukwe e-cargo, okudingekayo uma kuziwa ekubhejeleni ngokunethezeka.
Ama-complements nawo athola ukuvelela okukhulu kulokhu kuhlela. Zonke izingubo seziqediwe nge- izimbadada zesikhumba ezishukiwe usebenzisa. Isikhwama se-raffia eselukwe ngesandla namabhande anezintambo ahambisana nezingubo okhalweni nakho akubonwa.
UMassimo Dutti ukhuthaza ubulula futhi usimema ukuthi sikhethe okuhambisana nendlela yethu yokuphila, ngoba lokho akukho okunye okuyisitayela.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » imfashini » Ngigqokani » UMassimo Dutti wethula indlu entsha yokushicilela i-SS21: Izinto zemvelo
Ukudla okusiza ukuthi wehlise i-cholesterol
AmaPom Pom Poms: Imibono Elula Yokuhlobisa